Ilma yar oo Gaalkacyo lagu kufsaday kadibna si arxan darro ah loo dilay - BBC News Somali
Sawir tusaale ah
"Gabadhaasi way dhimatay, intii dhashay samir iyo iimaan alle haka siiyo, ilma yar ayay ahayd, reekooda ayaa adeeg u dirsaday, ka dibna waa la afduubtay" ayuu sheegay sarkaalkan ka tirsan booliska.
Kumannaan ruux oo ka mudaaharaaday xukun kufsi
Caro ka dhalatay kufsi iyo dil la isugu daray gabadh 8 jir ah
Pakistan: Nin kufsi iyo dil u geestay gabar Lix sano jir ah oo la soo qabtay
"Dhawaan gabar ayaa la kufsaday oo walibana aan aqaanay dadkii kufsaday, waalidiintooda markii aan u tagnayna hub iyo gaadiid intay siiyeen ayay yirahdeen oradaha oo baxsada, haddii shacabka uusan kula shaqeneyn booliska ma shaqeyn karo" ayuu raaciyay Taliye Axmad.
"Runtii arrin foolxun oo ugub ah ayaa ka dhacday Galkacyo, hay'adihii baarista in ay howshoodu fuliyaan ayaa kala hadalnay, way dhici jireen kiisaska kufsiyada, balse kufsi dil uu la socdo waa markii ugu horresay, haddeerna koox ka socota sheybaarka barista ayaa halkaasi ku sii jeeda, waxaana halkaasi ka suurtagaleysa in dadkii dhibka geystay laga ogaado". Waxaa sidaasi BBC-da u sheegay Maxamed Yuusuf oo ah guddoomiyaha xafiiska xuquuqlka insaanka ee Puntland.
Muxuu yahay hadalka dadka badan wadnaha jaray ee Erdogan uu ka dhahay masaajidka Aaya Soofiya?